दैनिक पिउनुहोस् मेथी भिजाएर पानी : ग्याष्ट्रिक ,सुगर ,पाइल्स लगायत रोगमा अचुक फाइदा ! – Sandesh Press
दैनिक पिउनुहोस् मेथी भिजाएर पानी : ग्याष्ट्रिक ,सुगर ,पाइल्स लगायत रोगमा अचुक फाइदा !
August 30, 2021 278
के तपाईले कहिल्यै मेथीको पानीको बारेमा सुन्नुभएको छ ? यदी सुन्नुभएको छैन भने थाहापाइ राख्नुहोस सधैं बिहान मेथीको पानी पिउनाले हुन सक्छ अमुल्य लाभ। थाहा पाउनुहोस मेथीपानी खानुका फाइदा:कोलेस्ट्रोल कम गर्नु छ र क्यान्सर जस्तो बिरामीबाट सुरक्षित हुनको लागि पनि मेथीपानी एक सरल र प्रभावकारी औषधी हो । यतीमात्रै होइन यसले तपाईको कपाल र अनुहारको लागि पनि धेरै फाइदा गर्छ ।
जोर्नीको दुखाईको लागि पनि मेथीपानी एक अचुक उपचार हो । सामान्यतया दुखाईबाट राहत पाउनको लागि मेथी सेवन गरिन्छ र चिसोमा मेथीको लड्डु बनाएर पनि सेवन गरिन्छ ।उच्च रक्तचापको समस्या छ भने पनि मेथीपानी तपाईको लागि धेरै नै उपयोगी हुन्छ । यसले रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ र यस सम्बन्धी अन्य समस्याहरुको पनि समाधान गर्छ ।
एक गिलास पानीमा एक चम्चा मेथीदाना रातभर भिजाएर राख्नुहोस र विहान उठ्नासाथ खाली पेटमा पिउनुहोस । नियमित यस्तो गर्नाले तपाईको तौल कम हुन्छ र तपाई स्लिम र आकर्षक शरिर बनाउन सक्नुहुनेछ ।सुगरका बिरामीलाई यो तरिका धेरै प्रभावकारी हुन्छ । सधैं मेथीपानी सेवन गर्नाले सुगरको समस्या छिटै समाधान हुन्छ र रगतमा सुगरको लेभल घट्छ ।
यसैगरी नरिवलको तेल हामी मध्ये सबैले सुनेको हुनुपर्छ । नरिवलको तेल लोभलाग्दा प्याकमा बजारमा बिक्रिका लागि राखिएको पनि देखेकै हुनुपर्छ । तर नरिवलको तेल खानाले हुने फाइदाहरुका बारेमा हामीमध्ये धेरैजनालाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ । आज डिसीनेपाल तपाईंलाई नरिवलको तेल खाने गर्नाले मानव शरीरमा हुने फाइदाहरुका बारेमा जानकारी गराउँदै छौं ।
नरिवलको तेलले थाइराइड कसरी निको पार्छ?अमेरिकनहरु प्राय हात र पाइताला चिसोहुने, शरीरको तापक्रम न्यून, नाक सुकसुक गर्ने व्यथा, प्रायजसो चिसो अनुभव भैरहने, टाउको दुख्ने बेथा, निंद्रा नलाग्ने समस्या, सुख्खा छाला, सुनिएको आँखा, कपाल झर्ने रोग जस्ता समस्याले पिरोलिएका हुन्छन् कमलो नङ, जोर्नी दर्द, कब्जियत, दिमाग बोदोहुने समस्या, थकान, बारम्बार संक्रमण, धोद्रे बोली जस्ता समस्या पनि अन्य मुलुकका नागरिकहरु भन्दा अमेरिकनहरुमा बढी देखापर्छ ।
कान टिनीनीनी बजेजस्तो महसुस, रिंगटा लाग्ने, यौनइच्छाको अभाव र शरीरको तौल अनावश्यक रुपले बढ्ने समस्या बाट पनि अमरिकनहरु पीडित छन् । र यी समस्याहरु कतिपय अवस्थामा नियन्त्रण गर्नै गाह्रो छ ।अनुसन्धानले के देखाएको छ भने अमेरिकाको कुल जनसंख्याको करिव ६५ प्रतिशत मानिसहरुको शरीरको तौल अनावश्यक रुपले बढेको छ । र २७ प्रतिशत अमेरिकनहरु अति मोटो जिउडाल भएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
बैज्ञानिकहरुका अनुसार विशेषगरि महिलाहरु मोटो हुनुमा थाइराइडलाई मुख्य कारण मानिएको छ । अनि थाइराइडबाट छुटकारा पाउन नरिवलको तेल अचुक ओखती हो ।नरिवलको तेलमा पानीको मात्रा लुकेको हुन्छ र यसले भोकमार्ने काम पनि गर्छ । नरीवलको तेल सेवन गर्नाले अन्य खानेतेलले जस्तो शरीरमा तनाव तथा स्ट्रेस हुँदैन । अन्य खानेतेलमा शरीरमा तनाव पैदागर्न सक्ने एक प्रकारको ओक्सीडेटिभ स्ट्रेस भन्ने तत्व रहन्छ जसका कारण शरीरको तौल अनावश्यक रुपमा बृद्धि हुनेगर्छ ।
खाने तेलमा उपलब्ध ओक्सीडाइज्ड र र्यान्सीड भन्ने तत्वले शरीरको तन्तुहरुलाई हानी पुर्याउने काम गर्छ जसले कलेजोलाई सिधै असर पुर्याउँछ । तर नरिवलको तेल खाने गर्नाले शरीरमा एक प्रकारको एसिड उत्पादन हुन्छ जसले तन्तुलाई जोगाइराख्न ठूलो भूमिका खेल्नुका साथै शरीरको तौल नियन्त्रण गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ ।
यद्धपि, यसको बारेमा बिस्तृत रुपमा बैज्ञानिक अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ । तर पनि कतिपय अध्ययनले के सावित गरिसकेको छ भने नरिवलको तेल अन्य खानेतेलहरु भन्दा शरीरको निम्ति अति लाभ दायक सावित भएको छ । नरिवलको तेल सेवन गरेर धेरै मानिसहरुले आफ्नो थाइराइड समस्या समाधान भएको पाइसकेका छन् । तसर्थ नरिवलको तेलमा खानेकुरा पकाएर खानुहोस् र शरीरमा हुनसक्ने हानी नोक्सानी बाट बच्नुहोस्
Prevलक्ष्मीले बताएका ती पाँच प्रकारका व्यक्ति, जसको घरमा धनको बास हुँदैन :
Nextविरलै देखिने यी सपना कसैलाई नभन्नु : शुभःफल प्राप्ति हुन्छ ,धनलाभ हुन्छ !
दुर्घटनामा परि गम्भीर घाईते भएकी नर्स निशा सुब्बाको निधन